Iimpahla zangaphantsi ezingenamthungo
Ikawusi ePhezulu yedolo
Ikawusi yeMidlalo yeFashoni
Ikawusi yoMntwana naBantwana
Yintoni ekufuneka uyibeke ingqalelo kwi-design yeesokisi
ngu admin on 21-12-08
Abaninzi abaqulunqi beekawusi bangoku abanamsebenzi. Abanye baqala kumzi-mveliso. Oku kunenzuzo. Qonda nje imveliso. Yazi ukuba yeyiphi uyilo enokusetyenziswa kwaye yeyiphi engenakusetyenziswa. Ezinye zenziwe ngegraphic design. Ezi kufuneka zihlengahlengiswe ngokucothayo. Omnye ngumsebenzi wobugcisa. Imifanekiso yabo...
Kubagijimi, iisokisi zinika induduzo ebalulekileyo kunye nokukhusela.
ngu admin on 21-11-16
Ikawusi. Zinokuba nemibala, ziguquguquke, okanye zixhonywe ngononophelo kwitshimini. Banceda ukukhusela iinyawo kwi-blisters kunye nephunga lezihlangu. Banokuba nesitayile kwaye bayifanele ngokwenene! Kubagijimi, iisokisi zinika induduzo ebalulekileyo kunye nokukhusela. Iikawusi ezingalunganga zinokwenza iinyawo zimanziswe yimfumba yokubila...
Ndidikwe zizithintelo ze-COVID, iiFinns zibaleka kwikhephu elinzulu linxibe iikawusi
ngu admin on 21-10-30
Ngenxa yobhubhani we-coronavirus, abakwaFinns banomdla wokunqanda indawo yokuzivocavoca kunye nezinye iindawo zemidlalo yangaphakathi kobu busika. Bafumene indlela entsha yokuhlala esempilweni-ebaleka kwikhephu ngaphandle kokunxiba izihlangu zoqeqesho, Gqoka kuphela iikawusi ezishinyeneyo zoboya. Ikhephu eFinland kobu busika linzima kakhulu, kwaye libaleka...
Ubuy ezemidlalo bra ukhululekile kwaye cute
ngu admin on 21-09-08
Ah, iibras zezemidlalo-uyazithanda okanye awuzithandi. Ukuba uwela kudidi “lokubathiya”, funda apha: Le seti efikelelekayo inokutshintsha ingqondo yakho. Mhlawumbi ibra yakho yangoku ayikhululekanga kwaye isondele kakhulu eluswini, isenza kube nzima ukuhamba ngexesha lokomelela okuthandayo ...
Ngawaphi amacebiso okuthelekisa umbala anawo iikawusi?
ngu admin on 21-09-02
Izakhono zokuhlanganiswa kweekawusi, zahlulwe zibe zimbini, enye izakhono zokudibanisa umbala, enye izakhono zesitayile. Namhlanje siza kuthetha ngeendlela zokudibanisa umbala. 1. Iisokisi ezimnyama, ezimhlophe kunye negrey zihamba kakuhle kunye nezicathulo ezimnyama, ezimhlophe kunye nezimpunga. 2. Ngokubhekiselele kumbala westocking, umhlophe ngowona umhlophe, ulandelwa ...
Yenza iikawusi zokuzonwabisa kunye nezefashoni zamadoda..
ngu admin on 21-08-19
Iisokisi enye yezona zambatho zibalulekileyo, kodwa ukubaluleka kwazo, umsebenzi kunye nobuhle zihlala zinganakwa. Awufuni ukuba luhlobo lomntu onxiba iikawusi ezimhlophe zabasebenzi kunye neesuti okanye iikawusi ezisesikweni zokuzilolonga, ngenxa yokuba kukho ipere yeekawusi ezicocekileyo kwidrowa. Ukuyibeka buthuntu...
Thatha ezi kawusi zeholide ukuze ufumane ulonwabo kunye nezizalisi zeekawusi zeeholide
ngu admin ngo 21-08-05
Ukusukela ngexesha lokupapashwa, amaxabiso kunye nokufumaneka kuchanekile. Funda ngakumbi malunga nokuthenga namhlanje. Ukuthenga ngeholide kunokuba nzima. Ngethamsanqa, sikubonelela ngesikhokelo esigqibeleleyo sesipho ngalo naliphi na ithuba, ukusuka ekuthengeleni umntu ofikisayo oqondayo ukuya ekufumaneni into efanelekileyo kweso speci...
Ukuba ne-sock esebenzayo efanelekileyo kuya kuba nefuthe kwinduduzo yakho
ngu admin on 21-07-29
Nokuba uyingcaphephe ebalekayo okanye usandula ukuqalisa lo mdlalo, ukuba nesixhobo sokubaleka esifanelekileyo kuya kuba nefuthe kwintuthuzelo yakho, inqanaba lenkuthazo kunye nokusebenza kwakho ekusebenzeni kwemihla ngemihla. Makhe sijonge ezinye izixhobo zokusebenza ezisisiseko ezinokuphucula ukusebenza. Njengoko unokulindela, ...
Yintoni umahluko phakathi kweekawusi zezemidlalo kunye neekawusi zeshishini?
ngu admin nge 21-07-21
Kukho iiyantlukwano ezintathu eziphambili: Umahluko omnye: iikawusi zeshishini zinika ingqalelo kwinkangeleko, kwaye iikawusi zezemidlalo zinika ingqalelo kumgangatho, oko kukuthi, ukubonakala kweekawusi zeshishini kuneekawusi zezemidlalo ezibukeka kakuhle, kunye neekawusi zezemidlalo ezisemgangathweni. Umahluko ezimbini: iikawusi zeshishini zinxiba zithambe ngakumbi, zikhanya ...
Impahla yangaphantsi egqwesileyo yamadoda: iibhulukhwe zebhokisi kunye neepanty zomntu wonke
ngu admin ngo 21-07-05
Impahla yangaphantsi engalunganga iya kuyonakalisa inkangeleko yakho-kunye nosuku lwakho. Ukuba kukho imibimbi phantsi kweejini zakho ezizithandayo, okanye ibhanti lakho liqina kancinci itorso yakho, uya kuziva ungakhululekanga. Ngubani onokunikela ingqalelo xa ungakhululekanga? Isisombululo: Nyukela kwisibini kuluhlu lwethu lwawona madoda abalaseleyo...
Eyona mpahla yangaphantsi ingenamthungo yokusombulula nayiphi na ingxaki yempahla
ngu admin nge 21-06-24
Sonke siye sahlala ngolu hlobo xa sasidibanisa iimpahla ezintle… kwaye ke sonakaliswa ziifrills okanye iipanty ezishinyene kakhulu. Kulapho kungena khona eyona mpahla yangaphantsi intle engenamthungo. Ezi panty zingenabuso zisisiseko senkangeleko entle emininzi (zibalulekile kwiwadi engenagama...
Indlela yokukhetha iperi elungileyo yeekawusi zomsebenzi
ngu admin nge 21-06-16
Yonke imihla uhambahamba uya kubeka uxinzelelo ezinyaweni zakho. Ukuba usebenza imini yonke, udinga isisombululo sesokisi esinokuthatha umswakama kwaye sihlale sikhululekile ngexesha lokutshintsha kunye naluphi na ixesha elongezelelweyo. Iikawusi ezingcono kakhulu zokunxiba kunye neebhutsi zifakwe kwi-padded ukuqinisekisa ukuthuthuzela, gcina iinyawo zakho zomile, kwaye uthintele nayiphi na i-ho...
1234 Okulandelayo > >> Iphepha 1 / 4
E-Ubuy awuyi kufumana kuphela iikawusi kunye neengubo zangaphantsi ezingenamthungo ozifunayo, kodwa kunye neqabane loshishino elinobuhlobo, apho ishishini lamazwe ngamazwe liba lula. Sithembela kwinkonzo elungileyo kwaye injongo yethu kukuba nobudlelwane beshishini obuthembekileyo obusekwe kwinkonzo elungileyo kunye nomgangatho ophezulu.
Kuyiwaphi sifumane indawo?
Igumbi617,Ibhloko iTongrenjinghua NO.616 Indlela yeGudun, iHangzhou Zhejiang eTshayina